च्याम्पियन्स लिग : आयाक्स प्लेअफमा, पोर्टो बाहिरियो! | Hamro Khelkud
च्याम्पियन्स लिग : आयाक्स प्लेअफमा, पोर्टो बाहिरियो!
एजेन्सी – अघिल्लो सिजन उच्च प्रदर्शन गर्दै अविश्वनीय रुपमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको डच क्लब आयाक्स यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको प्ले अफमा पुग्न सफल भएको छ ।
मंगलबार राति भएको छनोटमा आयाक्सले पछि परेको स्थिति उल्ट्याएर पाओक थिसालोनिकीलाई ३–२ को जित निकाल्दै बालबाल प्ले अफमा स्थान बनाउन सफल भएको हो । आयाक्सले समग्रमा ५–४ को जित निकालेको हो ।
घरेलु मैदानमा आयाक्स खेलको २३औं मिनेटमा पछि परेको थियो । डिएगो विशेषवारले गोल गरेका थिए । ४३औं मिनेटमा डुसान टाडिकले बराबरी गोल फर्काए । ७९औं मिनेटमा निकोलसले गोल गर्दै आयाक्सलाई २–१ ले अघि बढाए । ८५औं मिेनटमा डुसान टाडिकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै आयाक्सलाई जितको बाटोमा उभ्याए ।
९०औं मिनेटमा डिएगोले गोल गरेपनि पाओकको हार टार्न सकेन । डच च्याम्पियन आयाक्सले अब च्याम्पियन्स लिगको समुह चरणमा स्थान बनाउन अपोइल निकोसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । अपोइलले क्वारावागमाथि समग्रमा ३–२ को जित निकालेको थियो ।
यता, पोर्चुगिज क्लब एएफसी पोर्टो च्याम्पियन्स लिग छनोटबाट बाहिरिएको छ । रसियन क्लब एफसी क्रास्नोडारसँग अवे गोलमा पछि पर्दै पोर्टाे छनोटबाटै बाहिरिएको हो । पोर्चुगलको क्लब पोर्टो पहिलो लेगमा १–० ले अघि थियो ।
तर दोस्रो लेगको खेलमा ३४ मिनेटभित्र ३–० ले पछि परेपछि पोर्टाेको सम्भाावना सकिएको हो । स्रो हाफमा जी लुईज र लुईस डियाजले एक एक गोल गरेपनि टोलीको हार टार्न भने सकेनन् । २००४ मा उपाधि जितेको पोर्टो २०१०–११ को सिजनपछि पहिलोपटक प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो ।
क्वारावागविरुद्ध अपोइल (२–३) समग्रमा
रोसेनवर्गविरुद्ध मारिवोर (३–१) समग्रमा
डाइनामो किभविरुद्ध क्लब ब्रग (३–४) समग्रमा
कोवेनहेवनविरुद्ध जेभेझ्दा (२–२) समग्रमा
फेरेनभारोसविरुद्ध डाइनामो जाग्रिव (१–५) समग्रमा
लास्कविरुद्ध बसेल (५–२) समग्रमा
ओलम्पियाकोसविरुद्ध इस्तानुबुल (३–०) समग्रमा
सेल्टिकविरुद्ध सीएफआर क्लज (४–५) समग्रमा